ला लिगा अब फेसबुकमा मात्रै हेर्न पाइने ! – Everest Dainik – News from Nepal
ला लिगा अब फेसबुकमा मात्रै हेर्न पाइने !
काठमाडौं, साउन २९ । आउँदो भदौ १ गतेदेखि विश्वको चर्चित फुटबल लिग मध्ये स्पेनिस ला लिगा सुरु हुँदैछ । नेपालसहित भारतीय उपमहाद्विपमा ला लिगा फुटबल, त्यसका क्लब तथा खेलाडीका धेरै फ्यान छन् । तर नयाँ सिजन सुरु भएसँगै यो क्षेत्रका ला लिगाका पारखीले टेलिभिजनमा खेल हेर्न पाउने छैनन् ।
नेपालसहित भारतीय उपमहाद्विपका फुटबल फ्यानले अब ला लिगाका खेल टेलिभिजनमा होइन फेसबुक लाइभमा हेर्नु पर्नेछ । नेपालसहितका भारतीय उपमहाद्विपमा ३४८ मिलियन फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । भारतमा मात्रै यसको संख्या २७० मिलियन रहेको छ । फेसबुकमा यसअघि नै अमेरिकी दर्शकका लागि मेजर लिग बेसबल प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आएको छ ।
फेसबुकले ला लिगाका आउँदा तीन सिजनका हरेक खेल लाइभ गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । नेपालसहित भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तानका ला लिगा प्रेमीले अब फेसबुकमा खेल हेर्नु पर्नेछ । यसअघि यो क्षेत्रमा ला लिगाका खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणको अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्कसँग थियो। -एजेन्सी
ट्याग्स: Facebook, Laa Ligaa, स्पेनिस ला लिगा